Abụ Ọma 119 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 119:1-176
Ọbụ abụ ji okwu Chineke kpọrọ ihe
‘Olee otú ndị na-eto eto ga-esi ebi ndụ dị mma?’ (9)
“Ihe ndị ị na-echetara m na-eme m obi ụtọ” (24)
“Ọ bụ okwu gị ka m tụkwasịrị obi” (74, 81, 114)
“M ji iwu gị kpọrọ ihe nke ukwuu” (97)
“M na-aghọta ihe karịa ndị nkụzi m niile” (99)
“Okwu gị bụ ọkụ m ji ahụ ebe m na-azọnye ụkwụ” (105)
“Okwu gị niile bụ eziokwu” (160)
Udo na-adịrị ndị ji iwu gị kpọrọ ihe (165)
א [Alef] 119 Ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta* na-enwe obi ụtọ,Ya bụ, ndị na-edebe iwu Jehova.+ 2 Ndị na-eme ihe ọ na-echetara ha na-enwe obi ụtọ,+Ya bụ, ndị ji obi ha niile na-achọ ya.+ 3 Ha anaghị eme ajọ omume. Ha na-eme ihe ọ chọrọ.+ 4 I nyere anyị iwuKa anyị lezie anya na-eme ihe i kwuru.+ 5 Ọ dị m nnọọ ka ya bụrụ na m ga-akwụsi ike+Ma na-eso ntụziaka gị mgbe niile. 6 Ọ ga-eme ka ihere ghara ime m+Mgbe m na-amụ iwu gị niile. 7 M ga-eji obi dị ọcha na-eto gịMgbe m na-amụta ihe ndị dị mma i kpebiri. 8 M ga na-eso ntụziaka gị. Biko, ahapụla m kpamkpam. ב [Bet] 9 Olee otú nwa okorobịa ga-esi na-ebi ndụ dị mma? Ọ bụ ịkpachara anya na-eme ihe i kwuru.+ 10 Eji m obi m niile na-achọ gị. Ekwela ka m hapụ iwu gị kpafuo.+ 11 M ji okwu gị kpọrọ ihe,*+Ka m wee ghara imehie gị.+ 12 Jehova, ka e too gị. Biko, kụziere m ihe i nyere n’iwu.* 13 Eji m ọnụ m na-akọsaIhe niile i kpebiri bụ́ ndị i kwupụtara. 14 Ana m aṅụrị ọṅụ maka ihe ndị ị na-echetara m+Karịa ka m na-aṅụrị ọṅụ maka ihe ọ bụla ọzọ bara ezigbo uru.+ 15 M ga na-echebara iwu gị echiche,*+M ga na-echebakwara otú ị chọrọ ka m si na-ebi ndụ echiche.+ 16 Iwu gị na-eme m obi ụtọ. Agaghị m echefu okwu gị.+ ג [Gimel] 17 Na-emeso ohu gị ihe otú dị mma,Ka m wee dịrị ndụ na-eme ihe i kwuru.+ 18 Meghee anya m, ka m na-ahụIhe ndị dị ịtụnanya dị n’iwu gị nke ọma. 19 Adị m ka onye mbịarambịa n’ala a.+ Ezorola m iwu gị. 20 Ọ na-agụsi m agụụ ike mgbe niileKa m mara ihe ndị i kpebiri. 21 Ị na-abara ndị dị mpako mba,Bụ́ ndị a bụrụ ọnụ maka na ha hapụrụ iwu gị kpafuo.+ 22 Mee ka a kwụsị ịkọcha m na ịkparị m,N’ihi na m na-eme ihe ndị ị na-echetara m. 23 Mgbe ndị isi nọkọdịrị na-ekwutọ m,Ohu gị na-echebara ntụziaka gị echiche.* 24 Ihe ndị ị na-echetara m na-eme m obi ụtọ.+ M weere ha ka ndị na-adụ m ọdụ.+ ד [Dalet] 25 M makpu ala n’ájá.+ Dowe m ndụ otú i kwuru.+ 26 M gwara gị ihe ndị m chọrọ ime, i wee za m. Kụziere m ihe i nyere n’iwu.*+ 27 Mee ka m ghọta ihe iwu gị pụtara,Ka m wee na-echebara ọrụ ndị dị ebube ị na-arụ echiche.*+ 28 Uju m na-eru emeela ka m gharazie ịna-ehi ụra. Mee ka m dị ike otú i kwere m ná nkwa.* 29 Ekwela ka m bụrụ onye aghụghọ.+ Meere m amara ma kụziere m iwu gị. 30 M kpebiela na m ga-abụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi.+ M ghọtara na ihe ndị i kpebiri ziri ezi. 31 M ji ihe ndị ị na-echetara m kpọrọ ihe.+ Jehova, biko, ekwela ka ihere mee m.+ 32 M ga-eji obi m niile* na-edebe iwu gịN’ihi na ị na-eme ka obi m nabata ha.* ה [Hee] 33 Jehova, biko, kụziere m+ otú m ga-esi na-eso ntụziaka gị,M ga-esokwa ya ruo n’isi.+ 34 Mee ka m na-aghọta ihe,Ka m wee na-erubere iwu gị isi,Jirikwa obi m niile na-edebe ha. 35 Na-edu m ka m wee na-edebe iwu gị,*+N’ihi na iwu gị na-atọ m ụtọ. 36 Mee ka obi m dịrị n’ihe ndị ị na-echetara m,Ọ bụghị n’ihe ga-abara naanị m uru.*+ 37 Nyere m aka ka m ghara ịna-ele ihe na-abaghị uru.+ Mee ka m na-eje ije n’ụzọ gị ka i wee dowe m ndụ. 38 Mezuoro ohu gị nkwa i kwere ya,*Ka e wee tụọ egwu gị.* 39 Ụjọ na-atụ m na a ga-emechu m ihu, ma ekwela ka e mechuo m ihuN’ihi na ihe ndị i kpebiri dị mma.+ 40 Idebe iwu gị na-agụsi m agụụ ike. Dowe m ndụ n’ihi na ị bụ onye ezi omume. ו [Wọọ] 41 Jehova, biko, gosi m na ị hụrụ m n’anya,*+Zọpụta m otú i kwere m ná nkwa.*+ 42 Mgbe ahụ, m ga-aza onye na-akparị m okwu,N’ihi na m tụkwasịrị okwu gị obi. 43 Ewepụla eziokwu n’ọnụ m,N’ihi na m na-atụ anya* ihe ị ga-ekpebi. 44 M ga na-edebe iwu gị mgbe niile,Ruo mgbe niile ebighị ebi.+ 45 E nweghị ihe ga-eme m n’ebe ọ bụla m gara,+N’ihi na m na-edebe* iwu gị. 46 M ga-ekwu gbasara iwu gị n’ihu ndị eze,Ihere agaghịkwa eme m.+ 47 Iwu gị na-eme m obi ụtọ. N’eziokwu, m ji ha kpọrọ ihe.+ 48 M ga-agbasa aka m kpee ekpere maka na m ji iwu gị kpọrọ ihe,+M ga-echebakwara ntụziaka gị echiche.*+ ז [Zayin] 49 Cheta okwu ị gwara* ohu gị,Nke i ji mee ka m nwee olileanya.* 50 Ọ bụ ya na-akasi m obi n’ahụhụ m na-ata,+N’ihi na okwu gị echebela m ndụ. 51 Ndị mpako na-akparị m. Ma anaghị m ahapụ iwu gị.+ 52 Jehova, m na-echeta ihe ndị i kpebiri kemgbe oge ochie,+Ha na-akasikwa m obi.+ 53 Ezigbo iwe ji m n’ihi ndị ajọ omume,Ndị na-ahapụ iwu gị.+ 54 M na-eji ntụziaka gị abụ abụN’ebe ọ bụla m bi.* 55 Jehova, ana m echeta aha gị n’abalị,+Ka m wee na-edebe iwu gị. 56 M na-eme ihe a mgbe niileMaka na m chọrọ ịna-erubere iwu gị isi. ח [Het] 57 Jehova bụ òkè m.+ M kwela nkwa na m ga na-eme ihe i kwuru.+ 58 Eji m obi m niile na-arịọ gị.+ Meere m amara+ otú i kwere m ná nkwa.* 59 Echebarala m otú m si ebi ndụ echiche,Ka m wee mewekwa ihe ndị ị na-echetara m.+ 60 M na-edebe iwu gị ngwa ngwa.+ Anaghị m egbu oge idebe ya. 61 Ndị ajọ omume ji ụdọ gbaa m gburugburu,Ma anaghị m echefu iwu gị.+ 62 Ana m ebili n’etiti abalị kelee gị+N’ihi ihe ndị dị mma ị na-ekpebi. 63 Abụ m enyi ndị niile na-atụ egwu gị,Bụrụkwa enyi ndị na-edebe iwu gị.+ 64 Jehova, a na-ahụ ịhụnanya gị* n’ụwa niile.+ Kụziere m ihe i nyere n’iwu.* ט [Tet] 65 Jehova, i mesola ohu gị ihe otú dị mma,Otú i kwere m ná nkwa.* 66 Kụziere m ihe ka m wee mara ihe ma na-aghọta ihe,+N’ihi na m tụkwasịrị iwu gị obi. 67 Mgbe a na-atabeghị m ahụhụ, m nọ na-eme mmehie.* Ma ugbu a, m na-eme ihe i kwuru.+ 68 Ị dị mma,+ ihe ndị ị na-eme dịkwa mma. Kụziere m ihe i nyere n’iwu.*+ 69 Ndị mpako na-ekwu ihe na-abụghị eziokwu gbasara m,Ma m ji obi m niile na-edebe iwu gị. 70 Ihe anaghị emetụ ha n’obi.+ Ma iwu gị na-eme m obi ụtọ.+ 71 Ọ dị mma na a tara m ahụhụ,+Ka m wee mụta ntụziaka gị. 72 Iwu i mere ka a mara dị m mma+Karịa ọtụtụ puku ọlaọcha na ọlaedo.+ י [Yod] 73 Ọ bụ gị kere m ma kpụọ m. Mee ka m na-aghọta ihe,Ka m wee mụta iwu gị.+ 74 Ndị na-atụ egwu gị na-ahụ m ṅụrịa ọṅụ,N’ihi na ọ bụ okwu gị ka m tụkwasịrị obi.*+ 75 Jehova, ama m na ihe ndị i kpebiri dị mma+Nakwa na ị tara m ahụhụ maka na ị bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi.+ 76 Biko, ka ịhụnanya gị*+ kasie m obi,Otú i kwere ohu gị ná nkwa.* 77 Meere m ebere, ka m wee dịrị ndụ,+N’ihi na iwu gị na-eme m obi ụtọ.+ 78 Ka e menye ndị dị mpako ihere,N’ihi na ha na-eme m ihe ọjọọ n’enweghị ihe m mere ha. Ma m ga-echebara iwu gị echiche.*+ 79 Ka ndị na-atụ egwu gị lọghachikwute m,Ya bụ, ndị ma iwu gị. 80 Ka m jiri obi m niile na-eso ntụziaka gị,+Ka ihere wee ghara ime m.+ כ [Kaf] 81 M na-atụsi anya ike ka ị zọpụta m,+N’ihi na ọ bụ okwu gị ka m tụkwasịrị obi.* 82 M na-atụ anya ihe ị ga-ekwu+Mgbe m nọ na-asị: “Olee mgbe ị ga-akasi m obi?”+ 83 N’ihi na adị m ka karama akpụkpọ anwụrụ ọkụ mịkpọrọ,Ma anaghị m echefu ntụziaka gị.+ 84 Afọ ole ka ohu gị ga-echeru? Olee mgbe ị ga-eme ndị na-akpagbu m ihe i kpebiri?+ 85 Ndị mpako, bụ́ ndị na-anaghị edebe iwu gị,Na-egwuru m olulu. 86 E kwesịrị ịtụkwasị iwu gị niile obi. Ndị mmadụ na-akpagbu m n’enweghị ihe m mere ha. Nyere m aka.+ 87 Ọ fọrọ obere ka ha laa m n’iyi,Ma ahapụghị m iwu gị. 88 Dowe m ndụ n’ihi ịhụnanya gị,*Ka m wee na-eme ihe ndị ị na-echetara m. ל [Lamed] 89 Jehova, okwu gị ga-adịgide n’eluigweRuo mgbe ebighị ebi.+ 90 Ị bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi n’ọgbọ niile.+ Ị tọsiri ntọala ụwa ike, ka o wee dịgide.+ 91 Ha* dị adị ruo taa maka na ọ bụ ihe i kpebiri,N’ihi na ha niile na-ejere gị ozi. 92 A sị na iwu gị anaghị eme m obi ụtọ,M gaara ala n’iyi n’ihi ahụhụ m na-ata.+ 93 Agaghị m echefu iwu gị echefu,N’ihi na ọ bụ ha ka i ji dowe m ndụ.+ 94 Abụ m nke gị. Zọpụta m+N’ihi na m na-edebe* iwu gị.+ 95 Ndị ajọ omume na-eche m ka ha gbuo m,Ma, m na-echebara ihe ndị ị na-echetara m echiche. 96 Ahụla m ọtụtụ ihe zuru okè,Ma iwu gị kacha ha niile mma. מ [Mem] 97 M ji iwu gị kpọrọ ihe nke ukwuu.+ M na-echebara ya echiche* kwa ụbọchị.+ 98 Iwu gị na-eme ka m mara ihe karịa ndị iro m,+N’ihi na ọ na-edu m ruo mgbe ebighị ebi. 99 M na-aghọta ihe karịa ndị nkụzi m niile+Maka na m na-echebara ihe ndị ị na-echetara m echiche.* 100 Otú m si eme ihe na-egosi na m na-aghọta ihe karịa ndị okenye,N’ihi na m na-edebe iwu gị. 101 Ekweghị m eso ụzọ ọjọọ ọ bụla,+Ka m wee na-eme ihe i kwuru. 102 Anaghị m ahapụ ime ihe i kpebiri,N’ihi na ị kụzierela m ihe. 103 Okwu gị na-atọ m ụtọ n’ọnụ. Ọ na-atọ m ụtọ karịa mmanụ aṅụ.+ 104 Iwu gị na-eme ka m na-akpa àgwà otú gosiri na m na-aghọta ihe.+ Ọ bụ ya mere m ji kpọọ ụzọ ọjọọ ọ bụla asị.+ נ [Nun] 105 Okwu gị bụ ọkụ* m ji ahụ ebe m na-azọnye ụkwụ,Bụrụkwa ìhè nke na-enwu n’ụzọ m.+ 106 M ṅụọla iyi na m ga-eme ihe ndị dị mma i kpebiri,M ga-emezukwa ya. 107 M tagbuola onwe m n’ahụhụ.+ Jehova, biko, dowe m ndụ otú i kwere m ná nkwa.*+ 108 Jehova, biko, ka àjà otuto m ji obi m na-achụrụ gị mee gị obi ụtọ.+ Kụziekwara m ihe ndị i kpebiri.+ 109 M na-anọ n’ọnụ ọnwụ* mgbe niile,Ma echefughị m iwu gị.+ 110 Ndị ajọ omume esierela m ọnyà,Ma ahapụbeghị m iwu gị kpafuo.+ 111 Agaghị m ahapụ ihe ndị ị na-echetara m,*N’ihi na ọ bụ ha na-eme ka obi na-atọ m ụtọ.+ 112 Ekpebiela m na m ga na-eso ntụziaka gịMgbe niile, sogide ya ruo n’isi. ס [Samek] 113 M kpọrọ ndị na-ejighị obi ha niile na-efe gị* asị,+Ma m ji iwu gị kpọrọ ihe.+ 114 Ị bụ ebe mgbaba m na ọta m+N’ihi na ọ bụ okwu gị ka m tụkwasịrị obi.*+ 115 Unu ndị na-eme ihe ọjọọ, sinụ n’ebe m nọ pụọ,+Ka m wee na-edebe iwu Chineke m. 116 Nyere m aka otú i kwere m ná nkwa,*+Ka m wee dịrị ndụ. Ekwela ka ihe m na-atụ anya ya ghara imezu.*+ 117 Nyere m aka ka e wee zọpụta m.+ Mgbe ahụ, m ga na-echebara ntụziaka gị echiche mgbe niile.+ 118 Ị na-ajụ ndị niile hapụrụ ntụziaka gị,+N’ihi na ha bụ ndị aghụghọ, ha na-aghakwa ụgha. 119 Ị na-awụfu ndị ajọ omume niile nọ n’ụwa otú e si awụfu irighiri ihe na-abaghị uru.*+ Ọ bụ ya mere m ji jiri ihe ndị ị na-echetara m kpọrọ ihe. 120 Ahụ́ na-ama m jijiji n’ihi ụjọ m na-atụ gị. M na-atụ ihe ndị i kpebiri egwu. ע [Ayin] 121 M kpeela ikpe ziri ezi, meekwa ezi omume. Biko, ahapụla m ka ndị na-emegbu m nweta m. 122 Kwe ohu gị nkwa na ị ga-enyere ya aka. Ekwela ka ndị mpako megbuo m. 123 Anya m anaghịzi ahụcha ụzọ ebe m na-atụ anya ka ị zọpụta m,+Ebe m na-echekwa ka i mezuo ihe dị mma i kwere m ná nkwa.*+ 124 Gosi ohu gị na ị hụrụ ya n’anya,+Kụziekwara m ihe i nyere n’iwu.*+ 125 Abụ m ohu gị. Mee ka m na-aghọta ihe,+Ka m wee mara ihe ndị ị na-echetara m. 126 Oge eruola ka Jehova mee ihe,+N’ihi na ha emebiela iwu gị. 127 Ọ bụ ya mere m ji jiri iwu gị kpọrọ iheKarịa ọlaedo, karịadị ezigbo ọlaedo.*+ 128 N’ihi ya, m weere ntụziaka* ọ bụla ị na-enye m ka ihe dị mma.+ M kpọrọ ụzọ ọjọọ ọ bụla asị.+ פ [Pee] 129 Ihe ndị ị na-echetara m dị ezigbo mma. Ọ bụ ya mere m ji na-eme ha. 130 Anya na-emepe mmadụ ma a kọwaa okwu gị.+ Ọ na-eme ka ndị na-amaghị ihe mara ihe.+ 131 Ịnụ iwu gị na-agụ m agụụ. Ọ na-agụsi m agụụ ike.+ 132 Chee ihu n’ebe m nọ ma meere m amara+Otú i kpebiri na ị ga-emere ndị ji aha gị kpọrọ ihe.+ 133 Jiri okwu gị duzie m ka m ghara ịzọhie ụkwụ.* Ekwela ka ihe ọjọọ ọ bụla na-achị m.+ 134 Napụta m n’aka ndị na-emegbu mmadụ,M ga-edebekwa iwu gị. 135 Meere ohu gị amara,*+Kụziekwara m ihe i nyere n’iwu.* 136 Otú ndị mmadụ si na-enupụrụ iwu gị isiNa-eme ka anya mmiri na-agbasi m ike.+ צ [Sadee] 137 Jehova, ị bụ onye ezi omume,+Ihe ndị i kpebiri zikwara ezi.+ 138 Ihe ndị ị na-echetara m dị mma,E kwesịkwara ịtụkwasị ha nnọọ obi. 139 Ihe gbasara gị na-anụ m ọkụ n’obi+Maka na ndị iro m echefuola okwu gị. 140 A nụchara okwu gị anụcha nke ọma,+Ohu gị jikwa ya kpọrọ ihe.+ 141 E nweghị ihe m bụ, a na-eledakwa m anya.+ Ma echefubeghị m iwu gị. 142 Ị na-eme ezi omume ruo mgbe ebighị ebi,+Iwu gị bụkwa eziokwu.+ 143 Ọ bụ eziokwu na m na-ata ahụhụ, ihe ana-esikwara m ike,Ma iwu gị ka na-eme m obi ụtọ. 144 Ihe ndị ị na-echetara m ziri ezi ruo mgbe ebighị ebi. Mee m ka m na-aghọta ihe,+ ka m wee dịrị ndụ. ק [Kof] 145 M ji obi m niile na-akpọ gị. Jehova, biko, za m. M ga-eso ntụziaka gị. 146 M na-akpọ gị. Zọpụta m. M ga-eme ihe ndị ị na-echetara m. 147 M biliela n’isi ụtụtụ ka m rịọ gị ka i nyere m aka,+N’ihi na ọ bụ okwu gị ka m tụkwasịrị obi.* 148 M na-emeghe anya m n’ime abalị,*Ka m wee chebara okwu gị echiche.*+ 149 Gee m ntị n’ihi ịhụnanya gị.*+ Jehova, biko, dowe m ndụ maka na ị na-ekpe ikpe ziri ezi. 150 Ndị na-eme omume na-eme ihere na-abịa m nso. Ha ajụla iwu gị. 151 Jehova, ị nọ m nso,+Iwu gị niile bụkwa eziokwu.+ 152 Ọ dịla anya m mụtara gbasara iwu gị,Na i nyere iwu ndị ahụ ka ha dịruo mgbe ebighị ebi.+ ר [Resh] 153 Hụrụ ahụhụ m na-ata ma napụta m,+N’ihi na echefubeghị m iwu gị. 154 Kpechite ọnụ m ma napụta m.+ Dowe m ndụ otú i kwere m ná nkwa.* 155 A gaghị azọpụta ndị ajọ omumeMaka na ha anaghị eso* ntụziaka gị.+ 156 Jehova, ị na-eme ebere nke ukwuu.+ Dowe m ndụ maka na ị na-ekpe ikpe ziri ezi. 157 Ndị na-akpagbu m na ndị iro m dị ọtụtụ.+ Ma ahapụbeghị m ihe ndị ị na-echetara m. 158 M kpọrọ ndị na-aghọ aghụghọ asị nke ukwuuMaka na ha anaghị eme ihe i kwuru.+ 159 Eji m iwu gị kpọrọ ihe. Jehova, biko, dowe m ndụ n’ihi ịhụnanya gị.*+ 160 Okwu gị niile bụ eziokwu.+ Ihe ndị dị mma i kpebiri na-adịru mgbe ebighị ebi. ש [Sin] ma ọ bụ [Shin] 161 Ndị isi na-akpagbu m+ n’enweghị ihe m mere ha,Ma m na-akwanyere okwu gị ezigbo ùgwù.+ 162 Okwu gị na-eme ka m ṅụrịa ọṅụ+Otú onye kwatara ọtụtụ ihe n’agha si aṅụrị ọṅụ. 163 M kpọrọ okwu ụgha asị, m na-asọ ya oyi.+ Ma m ji iwu gị kpọrọ ihe.+ 164 M na-eto gị ugboro asaa n’ụbọchịN’ihi ihe ndị dị mma i kpebiri. 165 Udo na-adịrị ndị ji iwu gị kpọrọ ihe.*+ E nweghị ihe ga-eme ka ha daa. 166 Jehova, m na-atụ anya ka ị zọpụta m,M na-edebekwa iwu gị. 167 M na-eme ihe ndị ị na-echetara m,M jikwa iwu gị kpọrọ ihe nke ukwuu.+ 168 M na-edebe iwu gị, na-emekwa ihe ndị ị na-echetara m,N’ihi na ị ma ihe niile m na-eme.+ ת [Tọọ] 169 Jehova, biko, nụrụ ákwá m na-ebe ka i nyere m aka.+ Jiri okwu gị mee ka m na-aghọta ihe.+ 170 Nụrụ arịrịọ m na-arịọ ka i meere m amara. Napụta m otú i kwere m ná nkwa.* 171 Ka m na-eto gị mgbe niile+Maka na ị na-akụziri m ihe i nyere n’iwu.* 172 Ka m jiri okwu gị na-abụ abụ+N’ihi na iwu gị niile ziri ezi. 173 Dịrị njikere inyere m aka,+N’ihi na m kpebiri na m ga na-erubere iwu gị isi.+ 174 Jehova, m na-atụsi anya ike ka ị zọpụta m. Iwu gị na-emekwa m obi ụtọ.+ 175 Ka m dịrị ndụ ka m wee na-eto gị.+ Ka ihe ndị i kpebiri na-enyere m aka. 176 Akpafuola m ka atụrụ furu efu.+ Chọọ ohu gịN’ihi na echefubeghị m iwu gị.+
^ Ma ọ bụ “ndị na-akwụwa aka ọtọ.”
^ Na Hibru, “M na-edebe okwu gị n’obi m.”
^ Ma ọ bụ “ntụziaka gị.”
^ Ma ọ bụ “na-amụ iwu gị.”
^ Ma ọ bụ “na-amụ ntụziaka gị.”
^ Ma ọ bụ “na-amụ banyere ọrụ gị ndị dị ebube.”
^ Ma ọ bụ “i kwuru.”
^ Na Hibru, “ga-eji ọsọ.”
^ O nwere ike ịbụ, “ị na-eme ka obi sie m ike.”
^ Ma ọ bụ “Mee ka m na-eje ije n’ụzọ iwu gị.”
^ Ma ọ bụ “Ọ bụghị n’uru.”
^ Ma ọ bụ “ihe i kwuru.”
^ O nwere ike ịbụ, “Nke e kwere ndị na-atụ egwu gị.”
^ Ma ọ bụ “na-echere.”
^ Na Hibru, “na-achọ.”
^ Ma ọ bụ “ga-amụ banyere ntụziaka ị na-enye.”
^ Ma ọ bụ “nkwa i kwere.”
^ Ma ọ bụ “Nke i mere ka m chere.”
^ Ma ọ bụ “N’ụlọ ebe m bi ka onye mbịarambịa.”
^ Ma ọ bụ “m nọ na-emehie n’amaghị ụma.”
^ Ma ọ bụ “ị gwara ohu gị.”
^ Ma ọ bụ “ga-amụ iwu gị.”
^ Ma ọ bụ “ka m na-echere.”
^ Ya bụ, ihe niile o kere.
^ Ma ọ bụ “na-amụ banyere ya.”
^ Ma ọ bụ “na-amụ ihe ndị ị na-echetara m.”
^ Ma ọ bụ “M chị obi m n’aka.”
^ Ma ọ bụ “Ihe ndị ị na-echetara m bụ ihe nketa m ruo mgbe ebighị ebi.”
^ Ma ọ bụ “ndị obi ha kewara ekewa.”
^ Ma ọ bụ “otú i kwuru.”
^ Ma ọ bụ “ka ihere mee m.”
^ Okwu Hibru a sụgharịrị ebe a pụtara ihe na-abaghị uru na-esi n’ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo apụta mgbe a na-agbaze ya.
^ Ma ọ bụ “ka ụkwụ sie m ike.”
^ Na Hibru, “Mee ka ihu gị nwuoro ohu gị ìhè.”
^ Na Hibru, “tupu oge nche abalị.”
^ Ma ọ bụ “mụọ okwu gị.”
^ Na Hibru, “achọ.”
^ Ma ọ bụ “Obi na-eru ndị ji iwu gị kpọrọ ihe ala.”
Abụ Ọma 119